Kwilinge lokuvala umsantsa wendlala yehlobo, iGalveston County Food Bank iseke inkqubo yeKidz Pacz. Ngexesha leenyanga zasehlotyeni, uninzi lwabantwana abaxhomekeke kukutya simahla okanye kuncitshisiwe esikolweni bahlala besokola ukufumana ukutya okwaneleyo ekhaya. Ngenkqubo yethu ye-Kidz Pacz sibonelela ngokulungele ukutya, iipakethe zokutya ezilungele abantwana kubantwana abafanelekileyo iiveki ezilishumi kwiinyanga zehlobo.
Iintsapho kufuneka zihlangabeze itshathi yesikhokelo sokufumana i-TEFAP kwaye zihlale eGalveston County. Abantwana kufuneka babe phakathi kweminyaka emithathu ukuya kweli-3 ubudala.
Ndibhalisa njani kwinkqubo yeKidz Pacz?
Jonga zethu imephu interactive phantsi Fumana uNcedo kwiwebhusayithi yethu ukufumana indawo yeKidz Pacz kufutshane nawe. Nceda ufowunele indawo ekuyo ukuqinisekisa indawo yabo yeofisi kunye nenkqubo yobhaliso.
Ngolwazi oluthe kratya, nxibelelana noKelly Boyer kule nombolo: 409.945.4232 okanye kelly@galvestoncountyfoodbank.org
Yintoni eza kwiipakethi zokutya zeKidz Pacz?
Ipakethi nganye inezinto ezi-2 zesidlo sakusasa, izinto zasemini ezi-2, kunye nokutya oku-2. Umzekelo unokuba; Iikomityi ezi-1 zesiriyeli, ibha yesidlo sakusasa e-1, itoti enye ye-raviolis, ingqayi enye yebhotolo yamandongomane, iibhokisi zencindi ezi-1, ibhegi enye yetshizi, kunye neekomityi ezine zeapile.
Kukangaphi umntwana ofanelekileyo efumana ipakethi yokutya?
Abantwana abafanelekileyo bafumana ipakethi kube kanye ngeveki ngalo lonke ixesha lenkqubo elihlala liqala ekuqaleni kukaJuni kude kube phakathi ku-Agasti.
Kwenzeka njani ukuba isikolo okanye umbutho ube yindawo yokubamba inkqubo yeKidz Pacz?
Ukuba unomdla wokuba yindawo yokubamba iindwendwe ukuhambisa iipakethi zeKidz Pacz kubantwana ehlotyeni, nceda imeyile UKelly Boyer.
Indawo ye-2022 yokubamba indawo
Abathathi-nxaxheba banokubhalisa kwindawo enye kuphela ngexesha lenkqubo.
Gcwalisa ubhaliso kwindawo yesiza.